“Awoow-yaasheen isma gumaysan, Aabayaasheena isma gumaysan inaguna rag is gumaysan karra” Wasiirka Madaxtooyadda | Haqabtire News
“Awoow-yaasheen isma gumaysan, Aabayaasheena isma gumaysan inaguna rag is gumaysan karra” Wasiirka Madaxtooyadda
Wasiirka Wasaarada Madaxtooyadda JSL, Md. Maxamuud Xaashi Cabdi yo weft balaadhan oo ka tirsan Xukuumadda Somaliland oo uu hogaaminayo ayaa maanta xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hir galiyey degmada Xudun ee gobolka Sool. Wasiirka Xaashi iyo weftigaasi oo saaka si balaadhan loogu soo dhaweeyey degmadaasi, ayaa furay mashriic sadex ah, sidoo kalena maamulka degmada ku wareejiyey deeq raashin ah.
Soo dhawayntaasi ka dib ayaa munaasibad balaadhan lagu xarunta degmada Xudun, halkaasi oo khudbado laga jeediyey, Wasiirka Wasaarada Madaxtooyadda Maxamuud Xaashi oo ka mid ahaa madaxdaasi halkaasi ka hadashay ayaa jeediyey khudbad garnaqsi, ay oo dhinacyo badan taabanaysay, waxaanu yidhi
” Ugu horayn waxaanu ka mahad celinaynaa sidii diiranayd, niyada furnayd, dhaqanka wanaagsan ahayd ee aad noogu soo dhawayseen Degmadan Xudun iyo sidii naloo sooray, intaba waanu ka mahad celinaynaa. mar labaad waxaanu iyadana bogaadinaynaa niyad samida dadka iyo bulshada qoor-waynteeda dareenka ka muuqda. waxa aynu nahay dad walaalo ah, dad wadan leh ayeynu nahay, dad dhaqan soo jireen ah leh ayeynu nahay, waa waxa aynu kaga duwan nahay qoomiyadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan bulsho dhaqan ab iyo isir leh ayeynu nahay. dhaqankeedana way ku jirtay wax kala tirsiga iyo is qabashadu, waxa kale oo ku jirtay sida aynu u kala baxno iyo wax aynu ku kala baxno, dabaro iyo xeerar ayey lahayd.
Walaalayaal Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu waxgaradka iyo qoorweynta reer Sool iyo Sanaag barri u dhigay gogol, maaha go’gol been ah, waa mid run ah, waxaanu doonaynaa Walaalayaal in aanu idin turxaan saarno, waxaanu doonaynaa in aanu tabashadiina bi’ino, waxaanu doonaynaa inaynu Qaranka wada qaybano waynu wada leenahee, qarqarkiina qaybsada oo goosta, ka qayb gala Diiwaangalimaha iyo doorashooyinka. Rag dudi karra ma tihidin, rag wax wada leh ayeynu nahay, ninka halkan Xudun ku nool Xamar waxa uga dhaw Hargeysa, Gar-adag iyo iso Caynaba.( Laba ILAHAY ayaa u daawe qaada, Laba iyagaa daawe qaata). waxa aynu nahay kuwii ILAHAY u daawe, qaaday, dalka, dhulka, dhaqanka, dhalashada iyo dhiiguba waa inaga dhaxeeyaa, dhismaha dawladnimaduna waa inaga dhaxeeyaa, wixii la qawadayo waxaanu qabnaa in la toosiyo, (khalad waa markii la qabtaa.)